Imibuzo kunye nezimpendulo kwi-BSF yezilwanyana zokulima izilwanyana • U-Yurie BSF
Nceda ncedise ngombuzo uze uphendule ngomlingo we-BSF (isold black fly) kwi-SHARE (yabelane) kwiimidiya zoluntu ezifana ne-WA, FB, G +, Pinterest, LinkedIn Twitter njl Ngethemba ukuba le nkonzo yokwabelana ngolwazi ingaba sisindisi sethu ekugqibeleni kamva. Aaamiinn
Umbuzo kunye neempendulo kwi-Catfish Nursery
Liyini igama le-fly?
Ijoni elimnyama liyabaleka (i-hermetia illucens) okanye ibutho lomnyama lindiza.
Ngaba ikhuselekile kubantu?
Izimpukane isosha elimnyama (IHermmetia icinga) ukhuselekile kubantu ngenxa yokuba abaphatha izifo zengqondo njengezinye iintlobo zeempukane.
Ukufumana iinkcukacha, nceda khangela >> http://bit.ly/2KTuZu4
Uthini umahluko phakathi kwezinye iimpukane?
Izimpukane isosha elimnyama (IHermmetia icinga) ayifaki ukuqhambuka kwezifo.
Inyama inyama (sarcophagidae), i-fly fly (calliphoridae), indlu iyaba (musca domestica) kuzisa isibetho.
Ngokomzimba, ubungakanani bomzimba wabo nombala bahluke kakhulu.
Ubudala beempukane isosha elimnyama ngokukhawuleza phakathi kwe-5 - 8 iintsuku, ngelixa ezinye iimpukane zihlala ngaphezu kweentsuku ze-30.
Izimpukane isosha elimnyama akanakudla, kwaye uphila ngokusela kotshani okanye ubusi.
Iyakwazi ukuhlaziya iimpukane ezihlaza kunye neempukane zendlu.
Musa ukukhupha izifo zesifo ezifana nezinye iintlobo zeempukane.
Awuyi kupheka ngokutya kwabantu, kuba ijoni elimnyama liyabaleka ungadli
Ukuzala kakuhle kwiindawo ezishushu.
Iziphumo ezininzi ezibonakaliswe NGAKHO ZONKE ezilandelayo ze-BAU 10 inzuzo yeenkomo ze-BSF zamagogo >> http://bit.ly/2IUBtHg
Ijoni elimnyama liyabaleka abangadliyo, abo badlayo ngabantwana ababizwa ngokuba ngama-larvae okanye ama-maggots okanye ama-maggots.
Ukwahlula njani indoda kunye nowesifazane?
Indlela yokwahlula isondo ijoni elimnyama liyabaleka ukujonga zabo izitho zangasese.
Ubulili besibhakabhaka sesibhakabhaka senziwe njengedaliti.
Ngelixa izidalwa zesisu zihamba ngeenxa zonke njengeglasi okanye i-sunflower.
Bona iinkcukacha apha >> http://bit.ly/2u3GB6p
Uyazi njani ubudala?
Ukufumana ukuba iminyaka ye-BSF ingabonwa njani kwimisebenzi yabo yemihla ngemihla.
Ii-BSF ezincinci zihlala zijonge eludongeni lwesango okanye kwisebe.
Nangona i-BSF ikhulile abantu bekhupha kunye neqabane.
Hlola indawo yefama ye-99 yase-Indonesian ifama >> http://bit.ly/2AadIcv
Ngokubanzi, i-BSF ubudala iphakathi kweentsuku ezisibhozo kunye nezine.
ijoni elimnyama liyabaleka Kukho ezininzi kwiindawo ezininzi apho kukho imithi yemifula.
E-Indonesia kufuneka kubekho kuba iimpukane zingazalisa kakuhle kumazwe aseTropiki.
Ziziphi iimpawu zesisu?
Izizukulwana ijoni elimnyama liyabaleka emsila, ubude besisu obude besetyhula bufana nentsalane yesazi.
Nangona izilwanyana zesini zithwele njengama-coasters okanye i-sunflowers.
Xa ibhinqa likhupha izitho zomzimba ezibonisa ukuba ukhule kwaye ukulungele ukutshata.
Ukufumana iinkcukacha nceda khangela> http://bit.ly/2u3GB6p
Liza kuqala nini?
Kwiintsuku ezintathu okanye ezine emva kokugxothwa, i-BSF ikhulile ize ilandele.
Emva kokutshatisa kwimiba yeeyure, i-fly fly iya kufa.
Nangona ibhinqa lihamba ezimbini ukuya kweentsuku ezintathu emva kokufa emva kokubeka amaqanda.
Iyintoni ukutya okuthandayo?
I-BSF ayidli, ngexesha lobomi bakhe kuphela wayela amanzi amanzi okanye ubusi.
Ngaba kukho i-BSF, ezinye iimpukane zibalekela?
Kwimimandla yefama yefama kunezimpukane ezininzi isosha elimnyama liya kuqhuba ezinye iintlobo zeempukane ngokwazo.
Oku kungenxa yeqela leempukane isosha elimnyama ukwenza isandi / uphawu oluthi "lubonisa" intsimi yabo.
Umzekelo: ukuba ikati okanye inja okanye ingonyama ibonakalisa intsimi yabo ngokuthi "ukucoca" kwintsimi yabo okanye emthini.
Ngokuqhelekileyo, abantu abadala abadala baya kutshata emva kweminyaka yobudala be-3 ukuya kwi-4 ngosuku.
I-BSf ihamba ngokubambisana emoyeni, ixosana, ize idibanise imizimba yazo kwaye iqhubekele emacaleni amaqabunga ngeendawo ezivulekileyo.
Oku kulandelayo inkqubo yokuxhatsha okanye ukuxuba oku babuyela komnye nomnye.
Ukufumana iinkcukacha nceda khangela> http://bit.ly/2NpSY5L
Kude kube nini ixesha lokuxilwa / ukulingana?
Ukuqhubana kwe-BSF okanye umtshato uhlala kwi-5 - 10 imizuzu. Ngaphezu koko, bahlukana.
Zibeka njani amaqanda?
Iqanda le-magsf maggot likhutshwa ngezilwanyana zesini.
Xa i-BSF ikhupha amaqanda, izidalwa ze-BSF ziphuma zikhokelela kwimidiya yokugcinwa kwamaqanda njengamaqabunga, iziqwenga zekhadibhodi, ukhuni njalonjalo.
Zingaphi ii-BSF zibeka amaqanda?
I-BSF iveza enye phakathi kwamaqanda e-500 - 900, okanye ebizwa ngokuba yiqoqo leqanda le-BSF
Uhlobo luni lweqanda lufana njani?
Amaqanda e-BSf afakwe njengombala omhlophe, ogqithiseleyo uguqula umbala ukuba uphuse.
Xa ukuqhaqha i-larva yomntwana kuya kuwela ngqo kwindawo yokutya phantsi.
Iimpethu zengane zihlala zize zikhule malunga neveki ezintathu ukuya kwezine.
Kutheni izibungu okanye izigubhu zikhulu kakhulu?
I-BSf izibungu ziyaziwa kuba nzima ngenxa yokuba zihlala kwiimeko kunye nomxholo wetyuwa ophezulu, utywala, i-acids (acids) dan ammonia.
Kwiindawo ezibanda kakhulu kunye nokuntuleka kokutya ngokwemvelo izibungu ze-BSF ziya kuhlaselwa (ezingasebenzi).
Uze ubuyele kumsebenzi xa ubushushu bubuyela kwindawo eqhelekileyo okanye xa imithombo yokutya ikhona kwakhona.
Iimpuphu ze-BSf okanye ama-maggots zihlala zifumana amanqanaba amaninzi.
Iphawulwe ngokutshintshelwa kombala wesikhumba.
Ubumhlophe obomhlophe emva koko buya kumbala obomvu.
Kule nqanaba izibungu zingakhula ubude ukuya kwi-1,5 - 2cm.
Ngakanani iMaggot iqala ukufumana?
I-Larva iqala ngokuvelisa ukususela xa ichithwa, kwiimeko zokusingqongileyo kunye nokutya okuninzi.
Ngenye imini izibungu ziyakwazi ukuchitha udoti ngokuphindwe kabini ubunzima bomzimba.
Uneminyaka engakanani iMaggot?
Ngokubanzi, ubudala bemagot buphakathi kweemithathu neveki ezine.
Yintoni umlenze uthetha ukutshatyalaliswa?
Iqela inkunkuma ithetha badle izinto eziphilayo ezifana nezityalo, inkunkuma engcolileyo, umgquba wemfuyo kunye nenkunkuma.
I-Maggot ineenzuzo ezininzi?
I-BSF Maggots ineenzuzo ezininzi, kuba zizityebi kwizondlo, i-fat, calcium, i-amino acids, kunye neeprotheyini eziphezulu.
Ngoko kusetshenziswe kakuhle njengento yokutya kwezilwanyana kwiintlanzi, iinkukhu, izilwanyana ezinobuthi, ihagu, i-carnivores kunye ne-omnivores.
Ngokuqhelekileyo izigubhu zenziwa kwi:
I-Maggot isasetyenziswa kakhulu kwiyeza kunye negama le-maggot.
Okanye ukuba amapolisa asetyenziswe njengesixhobo sokuchonga iminyaka yobudala.
Kwamanye amazwe kuye kwaba yinto yokutya eyintandokazi kwaye iyafumaneka kwiivenkile. okanye kwenziwe kwidlanzi.
Kutheni i-Maggot BSF?
Kubaluleke kakhulu ukususela ekuqaleni ukuba uqonde kakuhle ukuba kwimfuyo iintethe zehlobo ijoni elimnyama liyabaleka okanye i-hermitia iyingozi.
Musa ukuhlakulela imfuyo efihlakeleyo ephethe izifo zesifo.
Indlela yokwahlula kulula kakhulu, i-BSF ibumnyama kwaye i-fly fly iluhlaza.
I-BSF ide kwaye iyingcipheko. Nangona iimpukane eziluhlaza zifutshane kwaye zinamafutha.
Prepupa isigaba seemvumba ezindala malunga neyesithathu ukuya kwezine.
I-Larvae efikelele kweli nqanaba ibonakala ngokulula kumbala oye waba mnyama.
Ngaba loo pupa?
I-pupa okanye i-cocoon phase apho izibungu zamagogwane zingenasiphako kwaye zixoke ngokuqinileyo njengezifile.
Kule nqanaba inkqubo yokwakhiwa kwamalungu eempukane, kwamehlo, ezinyaweni, kwisisu, intloko, njl njl.
I-pupa okanye i-cocoon i malunga neveki elidala ngaphambi kokutshintsha okanye ukukhahlela kwi-fly isosha elimnyama.
Yisiphi isitsha esiphezulu semigodi esenziwe?
Isitya sesitya sepaltiki esenziwe ngesamente nangezitena.
Isitya sesitya sepaltiki esenziwe ngezitena.
Isitya sokujikeleza esivela kwimpahla ye-culvert
Isitya sesitya sepaliti sezinto zokuhlala okanye izinto zokubhanqa
Ibhokisi yeebhokisi yeebhokisi ifana nebhokisi leqanda.
Isitsha sekhefu esinezixhobo ezininzi.
Izibhakabhaka zePlastiki okanye izitya zobukhulu bonke.
Isitsha sebhokisi yebhayisiki yezithelo.
Ukuba isiseko samanzi echibini senza umququ ungapheli?
Izimbiza zezilwanyana ezineziseko zentente zibhetele kunamanzi aphantsi komhlaba, kuba ukuhamba kwamanzi kungabonakalisa.
Ukuba ichibi lisesimweni sentente, kufuneka linike umgodi apho amanzi agxothwa khona echibini.
Kutheni ngokusebenzisa ipulasitiki yeplastiki okanye ityulin?
Ingxenye yebhasi yeplastiki okanye i-tarpaulin kufuneka inike umgodi ukususa amanzi amaninzi kwaye ulindele ukuba kwenzeke kwamanzi amaninzi.
Ubungakanani bomngcipheko kunye nemali kufuneka kulungiswe kwaye kuqinisekiswe ukuba ukujikeleza kwamanzi kuhamba kakuhle.
Yintoni eyenzekayo ukuba imidiya imanzi kakhulu?
Le meko ibonisa imidiya engaphilile ekuphuhliseni umququ kwaye ibangela iphunga elimnandi.
Maggot ayinempilo kuba inkqubo yokuphefumula iyaphazamiseka kakhulu.
Ezinye izigulane ziya kuphuma kwaye zibaleke.
Ziziphi iimpawu zemidiya enempilo?
Iimpawu zemidiya yempilo enempilo zilandelayo:
Iimidiya zikhululekile kwaye azizinzi kwaye azikhuli.
Kukho rhoqo iindaba ezintsha.
Imidiya yamaggot isisitshixo sokulima ngokuphumelelayo, kuthini oko kuthetha ntoni?
I-media yeMaggot yindawo apho iMaggot ihlala kunye nokutya ngenxa yemaggot ngokwayo.
Ukuba imozulu okanye i-maggot media iphilile, umgog uya kuphila ngokuzenzekelayo.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba i-media maggot ayiluxhili, iya kuthintela impilo kunye nokukhula kwemagog.
Kufuneka nini na ukubonelela ngeendaba ezintsha?
Njalo ixesha lokutya kweemaggot zinikezelwa, amajelo amiselwe iiveki ukuya kwiiveki ezimbini ngokugqithiseleyo kwi-media.
Indlela yokugcina imidiya yamaggot?
Amajelo aseMaggot kufuneka agcinwe ngokungongeza amajelo amasha rhoqo.
Amajelo agcinwa ngobumanzi ngokuthambisa rhoqo.
Yintoni enokusetyenziswa njengemidiya yemaggot?
Umzila weerisi obolile.
Indalo yemvelo okanye umquba.
Umquba umphumo we-fermentation.
Idada / iinqanawa / inkomo / ibhokhwe / umvundla / inkukhu / umgquba wodada.
Cocopit okanye i-coconut fiber.
Urata okanye ibhan.
Bona indlela apha >> http://bit.ly/2CuSxTY
Ngaba i-sawdust ingasetyenziswa njengemidiya yemaggot?
Unako, ukuba imidiya iyona nto ifumaneka kuyo.
Ingaba i-media maggot ingaxutyaniswa namanye amaphepha?
Unako, ingongoma kukusebenzisa izinto ezisetyenziswayo kwiimimandla zethu.
Ngaba imidiya yemagog kufuneka iditywe?
Ngokwenene iindaba ezinokuthi zisetyenziswe yiendaba eziphathekayo, njenge:
Udoti lwentengiso >> http://bit.ly/2EF2qAd
I-Bran okanye i-bran >> http://bit.ly/2IVj3G3
Inkunkuma yeoli yepilisi >> http://bit.ly/2Nsy9qe
Umquba weekukhu. >> http://bit.ly/2EEktY9
Umgquba weebhokhwe. >> http://bit.ly/2EA7lCl
Umgquba wenkomo. >> http://bit.ly/2RcfxPT
Umgquba wamanzi. >> http://bit.ly/2pRXkI6
Ukwahlula njani i-kasgot kwi-media?
I-Kasgot okanye i-maggot okanye amanqabunga amagosa kufuneka adibaniswe kwindawo enye.
Ukukwahlula i-cassava evela kumajelo, kuyacaca ukuba iimpawu ze-cassava zinomnyama, ukuthungca kufana nezilwanyana zesanti.
Ngaba umquba wemfuyo unganikwa ngqo kumgog?
Bona indlela apha >> http://bit.ly/2Lpt0OR
Ingaba isilwane esitsha senkomo singasetyenziswa njengesondlo se-maggot?
Bona indlela apha >> http://bit.ly/2RcfxPT
Yintoni kwaye ngubani na isilwanyana?
Iintshaba okanye izilwanyana zokulima umlingo:
Ziziphi iimfuno zendlu efanelekileyo ye-BSF / i-enclosure?
Unokubona iimfuno zokuhlala zeMaggot ku >> http://bit.ly/2tWfj2o
Ezinye izixhobo kunye nezixhobo kufuneka zinikezelwe njenge:
Indawo yokukhulisa iMaggot
Indawo yokuchithwa kwamaqanda
Indlela yokwenza iMaggot Pasta
Indlela yokwenza iMaggot Flour
Indlela yokwenza iMaggot ipeliti
Ngaba ukulima umlingo kunokushisa okushisayo?
Ukulima kweMaggot akuchaphazelekanga ngqo kukushisa kwemo engqongileyo, njengamaqondo atshisayo okanye ashushu, iindawo ezimanzi okanye ezomileyo njl.
Kungenxa yokuba uphuhliso lomgogu lunempembelelo ngqo yimeko yemidiya yamaggot ngokwawo. Kwaye imidiya yokuhlala i-maggot ingahlawuliswa ngokweemfuno zemigog.
Ukulima kweMaggot kungavuleka?
Ukulima kweMaggot kungenziwa ngaphandle okanye ngaphandle okanye kwigumbi elivaliweyo.
Ukulima kweMaggot kungenziwa kwindawo enomswakama onomoya ophantsi kunye nelanga.
Inyathelo Ngenyathelo Ukuhlakulela amaMaggots
Iziphakamiso zokufunda umlimi wamaggot kufuneka zenziwe ngezigaba, inyathelo ngesinyathelo ukwenzela ukuba iziphumo zibe zikhulu.
Ukongezelela, iziphumo zomsebenzi kwisinyathelo ngasinye kufuneka zihlaziywe ngokufanelekileyo okanye kufuneka zilungiswe.
Eli nyathelo elilandelayo ngokulima umgogodla, kubandakanywa umlingo wokuthengisa
Iingcebiso kubaqalayo kunye nabadala kwiingcebiso ezilungileyo
Isikhokelo sokuThengisa iMaggot
Ukuthengiswa kweMaggot kulula kakhulu, enye indlela ukuzithengisa yona ukuba isetyenziswe njengethuluzi lokunciphisa iindleko zokuthenga iipelisi.
Ukuba awunayo imfuyo yakho, ungasondela uze ufike kwiindawo ezibhalwe ngezantsi:
Uluntu lwamanzi olutsha kunye neziko.
Uluntu lwamanzi olutsha lwamanzi kunye neziko.
Uluntu kunye neziko leefama zeeflanzi.
Izithako ezithandekayo kunye nezityalo.
Izithako ezisisiseko zeemfuno zonyango.
Ulawulo lwenkunkuma ehlanganisiweyo kunye neebhanki zerhasi.
Ukuqalisa ishishini lokutya kwezilwanyana.
Ukwandisa ishishini leentlanzi kunye neenkukhu.
Thengisa kuYurie BSF.
Khangela indlela yokuthengisa ngayo i-Yurie BSF izibonelelo kubantu abanesidingo
Isibonelelo >> http://bit.ly/2V6gQyX
Ukumakishwa kweMaggot >> http://bit.ly/2RcS7tQ
Ukuthengisa kweMaggot >> http://bit.ly/2ELaFLS
UkuQeqesha ngokuPheleleyo kwiNkxaso yezilwanyana
Ukuba uthatha isigqibo sokuba uthathe inxaxheba ekuqeqesheni umlimi wamaggotha, kubalulekile ukuba angakwazi ukuvelisa umququ.
Kodwa khetha indawo yokuqeqesha eye yabonisa impumelelo, kuquka ukusabalalisa imveliso.
Oku kulandelayo inkqubo yoqeqesho kunye noYurie BSF:
1. UKUPHATHWA KWE-MAGGOT BSF
Uyakwazi ukuvelisa umbane we-BSF onobungane ngaphandle kwe-BAU, eneziphumo ezininzi kwiinyanga ze-1,5.
Cofa kwi-EVIDENCE> http://bit.ly/2Lpt0OR
2. ISICELO SE MAGGOT BSF
Unokuxuba umququ we-BSF enefomula ekhethekileyo ukuze imfuyo ikhule ngokukhawuleza.
Cofa kwi-EVIDENCE> http://bit.ly/2SXcBE8
3. I-MAGGOT BSF MARKETING
SITHETHA YURIE BSF !!! Awudingi ukudideka malunga nokuthengisa kwamagogane, kuba u-Yurie BSF uza kuyithenga
Cofa kwi-EVIDENCE> http://bit.ly/2Bu7zHQ
4. UKUPHUHLISWA KWEBHIZINISI
U-Yurie BSF unikeze uRp100.000.000 uncedo olungakumbi lomhlobo onokulusebenzisa ukwandisa amandla okuvelisa ibhizinisi lakho lokulima iMaggot.
Ukubuyiselwa kwemali I-PAID NE-MAGGOT NGEZINDLELA ZEMFUPHA - AKHO RIBA !!!
Cofa kwi-EVIDENCE> http://bit.ly/2oR86hp
5. I-AMBASSADOR YURIE BSFANDA AKAYA KUBA.
I-AMBASSADOR YURIE BSF ilungele ukuba khona kwifama yakho
I-AMBASSADOR Yurie BSF ukhona kwiixeko ze-100 ezingaphezulu ukunika izikhokelo ezichanekileyo kwiifama zazo.
Ku-YURIE BSF UNIVERSITY uya kunikwa uqeqesho olukhethekileyo lwezinga eliphezulu. Ukuqinisekisa ukulima kwe-BSF namhlanje ngaphandle kokuvumba kuhambelana ne-SOP ye-BSS yanamhlanje ngaphandle kwenkohlakalo (inkqubo yokusebenza ngokuqhelekileyo).
Cofa kwi-EVIDENCE> http://bit.ly/2A4kMY1
7. I-COOPERATIVE MAGGOT INDONESIA
Njengomhlobo ka-Yurie BSF, ngokuzenzekelayo uyilungu leKOPERASI MAGGOT INDONESIA.
I-Indonesian Cooperation yeMaggot ingowesizwe sase-Indonesian, njengeforamu esemthethweni yokuthenga umbane kunye nokuthengisa kunye nokunye uphuhliso lwezorhwebo.
Uya kunandipha inzuzo yokwabelana ngemali eseleyo yebhizinisi labasebenzi baseMindonesia.
Cofa kwi-EVIDENCE> http://bit.ly/2Lm1rGt
Uya kuba yinxalenye yophuhliso lweshishini-shishini lombutho ukuhlangabezana neemfuno zeemarike zasekhaya nakwamanye amazwe.
Lolu hlelo lwe-CSR lujoliswe kulabo abanako ukukwazi ukuthenga ipakethe yokulima ye-BSF yanamhlanje ngaphandle kovumba.
10. THANDISA NO KUTHETHA
Ukuqala kwimisebenzi yethu yansuku zonke ngomthandazo kuyimfuneko ukuba siqhubele phambili kwimini noThixo.
Ngoko le Yuroe BSF ayikho inkqubo ye-10 yiyona nto kunye ne-NUMBER enye yeenkqubo ze-9 eziye zahanjiswa.
99 Indawo yoLwandle
Ngaba kukho abalimi bemaggot kwisixeko sakini?
Hlola indawo ye-99 kwiifama ze-maggot zase-Indonesian
Ukubeka phambili ukhuseleko!
Nangona i-BSF ikhuselekile kubantu, kodwa ngokuqinisekileyo siza kudibana nelahla, imfuyo yemfuyo kunye nenkunkuma ezifana ne-oil oil sludge okanye inkunkuma ye-tofu njalonjalo.
Ngoko ke kubalulekile ngathi ukusebenzisa iiglavu. Ngokuqinisekileyo oku kuphepha ukuthatha izandla zethu zingcoliswe ziintsholongwane kunye nezifo.
Kutheni i-Maggot ifuna ukuba yimveliso yokulima?
I-Maggot iqulethe iiprotheyini eziphezulu eziphezulu zokuncedisa izityalo, ngoko kukulungele ukusetyenziswa ngokutya kwezilwanyana.
Ukutya kweMaggot kusemncinci kakhulu, njengemveliso yeemarike, izitya zokutya, umgquba, inkunkuma yefektri efumaneka lula kwaye ikhululekile.
Ukulima kweMaggot kulula kwaye ayibizi.
Ukuzala kuhamba ngokukhawuleza kwaye kungokwemvelo ngaphandle kokuvuthwa, ngaphandle kwemichiza, ngaphandle kwemishini.
Umngcipheko wesifo ekulimeni umlingo awuncinci.
I-Maggot amathuba okurhweba ngendlela ye-maggot pasta, umgubo womgubo, i-maggot pellets zivulekile kakhulu.
Iingenelo zeeNtshe eziGqirha?
Akukho nto yendalo kaThixo engenazo iinzuzo, kuquka neempukane eziluhlaza.
Nceda ubhekise kule vidiyo elandelayo ukufumana iingeniso ezinokuthi zithathwe kwiimpukane eziluhlaza.
Cofa >> http://bit.ly/2rQPGio